0 Monday June 29, 2020 - 12:26:16
Maamulka isku magacaabay Puntland ayaa qaadacay go'aan uu dhawaan gaaray baarlamaanka dowladda Federaalka kaasi oo ku saabsanaa in gobolka Banaadir uu aqalka sare ku yeesho xildhibaanno ugaar ah.
0 Monday June 29, 2020 - 11:27:43
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigga ciidanka Jabuuti ee ku yaalla duleedka magaalada Beledweyne.
0 Saturday June 27, 2020 - 19:39:56
0 Saturday June 27, 2020 - 19:10:59
0 Saturday June 27, 2020 - 13:55:19
0 Saturday June 27, 2020 - 12:13:38
Warbixin sanadeed looga hadlayay olole-dagaaleedka Islaam la dirirka ah ee ay horboodeyso xukuumada Washington oo ay soo saartay wazaarada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Xarakaatka Islaamiga ee ka jihaadaya qaarada Africa ay sii xoojiyeen dagaalada islamarkaana ay u hanqal taagayaan…
0 Saturday June 27, 2020 - 11:25:05
0 Saturday June 27, 2020 - 10:43:23
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar sarkaal boolis lagu dilay oo hmaanta ka dhacay degmada Kaaraan ee dhacda Bariga magaalada Muqdisho.
0 Saturday June 27, 2020 - 10:40:05
Dhamaan Warbaahinta Soomaaliyeed wey salaamanyihiin Waakan Dukumentarigii la sugayay ee Hadimada Haybsooca.
0 Friday June 26, 2020 - 11:19:09
0 Thursday June 25, 2020 - 20:32:54
Fagaare kuyaal degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya waxaa galabta ka dhacay xudkun kamid ah xuduudda Alle kaas oo lagu fuliyay rag xatooyo geystay.
0 Thursday June 25, 2020 - 19:40:52
0 Thursday June 25, 2020 - 19:33:42
Wararb dheeraad ah ayaa kaso baxaya qarax xooggan oo maanta duhurkii ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Thursday June 25, 2020 - 11:14:30
dhacdo naxdin leh ayaa lagasoo calaamadeeyay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo kamid ah meelaha ay ka dhacaan falalka amni darro.
0 Thursday June 25, 2020 - 07:29:25
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markale ku baaqay kulan ay yeeshaan isaga iyo madaxda maamul goboleedyada oo khilaaf ba'an uu ka dhaxeeyo.
0 Wednesday June 24, 2020 - 19:44:37
0 Wednesday June 24, 2020 - 12:19:37
Weerar xooggan ayaa markale lagu beegsaday saldhig ciidan oo kuyaal deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
0 Wednesday June 24, 2020 - 12:10:54
0 Wednesday June 24, 2020 - 10:38:06
0 Tuesday June 23, 2020 - 19:03:11
Wixii ka dambeeyay 1991 marba marka ka dambeysa waxa ay itoobiya ku dedaalaysay in ay noqoto awoodda dhexe ee geeska Afrika. Cabudhin badan oo ay ku hayeen shucuubta ay gumeystaan kaddib waxa dhalatey dawlad lagu soo dhisey maslaxad oo reer galbeed ka dambeeyeen. Ninka qabsadey dawladdaas waxa uu markiiba…
0 Tuesday June 23, 2020 - 19:02:11
Xog dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa falal kufsi ah oo ay ciidamada DF ka geysteen meel u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
0 Tuesday June 23, 2020 - 12:22:07
0 Tuesday June 23, 2020 - 11:23:22
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa weerarkii ugu xooganaa ee sanadkan waxay ka geysteen gudaha dalka Sacuudiga.
« Prev1 ... 45678910 ... 358Next »